SocialTV = Vhidhiyo + Yemagariro + Inopindirana | Martech Zone
Tekinoroji yeVhidhiyo iri kukwirisa… kubva kumeso ekuratidza, kusvika kumascreen makuru, kuenda ku3D, AppleTV, Google TV… vanhu vari kugovana nekudya mavhoriyamu akakura kupfuura nakare kose munhoroondo. Yakawedzerwa kune kuomarara ndiyo yechipiri chidzitiro - kutaurirana nepiritsi kana nharembozha iwe uchiona terevhizheni. Uku ndiko kuuya kweSocialTV.
Nepo chinyakare kutariswa kwevaterevhizheni kuchiderera, SocialTV iri kuratidza yakawanda vimbiso. SocialTV iri kuwedzera kutarisisa, kubatsira kusimudzira uye kunyange kutyaira yakananga kutengesa. Mikana yacho haina magumo neSocialTV uye mashandiro anoenderera mberi achivhura nhanho huru. Zviteshi zveterevhizheni zvechinyakare hazvisi kuzogara apo mari inobuda ichienda kumasaini epamhepo, SocialTV inopa mukana wekuchengeta mari uye kukura.
Mamwe makambani uye matekinoroji awo munzvimbo yeSocialTV:
ndege - Pinda yako yemuno pamusoro-iyo-mhepo chiteshi - ese makuru makuru enhepfenyuro network uye anopfuura makumi maviri mimwe migero - mune HD mhando.
Boxee - zvinongoerekana zvaendesa vhidhiyo kurudziro kubva kushamwari dzako paFacebook neTwitter kuTV yako uye inoita kuti iwe ugovane zvinhu navo kubva kubaya re kure.
Bhokisi rehove - boxfish inotora mazwi ese akataurwa paterevhizheni, sezvazvinoitika. Ivo vanogadzirisa iyo data mune chaiyo-nguva uye isu tinoishandisa seyatsva dura rekutsvaga kweTV vachishandisa piritsi (parizvino iri application yePadad).
ConnecTV - inobatanidza inotungamira masocial network, akasiyana masocial maficha, uye zvakajairwa-zvakagadziriswa zvemukati zvinobvumidza vashandisi kutaura nevamwe vataridzi vachitarisa zvaunofarira zvinoratidzwa.
GetGlue - sekungobvumirwa neChina mativi mana kuti utarise munzvimbo, GetGlue inokutendera iwe kuvaka pasocial network uye kutarisa mumitambo yeterevhizheni, mafirimu, uye mimhanzi.
Google tv - Tsvaga zvinhu zvakanaka kuti uone kana iri paTV mhenyu kana pawebhu, nekukasira kuwana uye kurudziro yakasarudzika pane akawanda masosi ezvinyorwa.
Kit yedhijitari - inopa simba kushandurwa kwetsika nhepfenyuro kune multiscreen Broadband TV, kurarama kana pakuda vhidhiyo mhinduro.
Miso - kuvaka yakakomberedzwa yechipiri ruzivo rwechiratidziro uye nyowani yekugadzira chikuva.
Rovi - inopa masimba ekugadzirisa maitiro ezvinyorwa kubva pane zvakasikwa kusvika mukuparadzirwa - uye inoendesa yako dijitari midhiya zvakananga kune vatengi pavanenge vachida iyo, kune akawanda mapuratifomu uye zvishandiso.
SnappyTV - iri nyore kushandisa, ine simba chikuva chinoita kuti hova dzinofamba uye nhepfenyuro yeTV yemagariro, nhare uye hutachiona
TVcheck - parizvino iri kuUK, TVcheck inzira yemahara, inonakidza uye yakapusa yekugovana rudo rwako rweTV, kuhwina mibairo uye kuungana pamwe neshamwari - pasina kukanganisa maonero ako.
WiOffer - Tsvaga wega terevhizheni neredhiyo WiOffers pane yako smart foni kana piritsi.
Xbox Live - Yako TV inoshandurwa kuita yakabatana yevaraidzo chiitiko neXbox LIVE. Tamba mitambo yeKinect neyekudzora neshamwari dzepamhepo chero kwavanenge vari kana pakarepo tarisa mafirimu eHD, maTV uye mitambo.
YapTV - goverana kuona kwako terevhizheni pa Twitter uye Facebook.
Newewo - Youtoo zvese zviri pasocial network uye terevhizheni network ine tekinoroji yepamusoro inoita kuti vashande pamwe chete.
Imwe tekinoroji inonakidza yechipiri skrini iri kuedzwa izvozvi kudhindwa kweminwe. Paunenge uchiona terevhizheni nharembozha kana piritsi, iyo application inomhanya uye mafingapiringi iyo terevhizheni inoratidza, bhaisikopo kana yekutengesa yekutamba uye inogadzira otomatiki chiitiko chekudyidzana pane yako yechipiri skrini.
Tags: boxeehoveclipynctorakit yedhijitariKushambadzira Vhidhiyomisosnappytvterevhizheni yemagariromagariroterevhizhenixbox livenewewo